စစ်အစိုးရနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ ပူးပေါင်းပြီး ၀ိုင်းမော်တွင် လယ်ယာမြေ ဧက ၁၀၀ ကျော်သိမ်းယူ | Ko Oo + Ma Thandar
« မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ …
ခေါက်ရိုးကျိုး နိုင်ငံရေးနှင့် အဆန်းထွင်သူများ »
Thursday, 30 December 2010 09:01	KNG
တရုတ်ကုမ္ပဏီမှ ဂေါ်ဆက်ယန်ကျေးရွာ၊ ဒိန့်ဂျန်ကျေးရွာရှိ ဒညှင်းပင်၊ အခြား သစ်သီးပင်များအား ခုတ်ဖြတ်ကာ လယ်ယာမြေများအားလုံးအား သိမ်းယူနေခြင်းဖြစ်သည်။
This entry was posted on December 30, 2010 at 11:07 am and is filed under လယ်သမားရေးရာ, ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.